IKhabhinethi yamaGcisa emazantsi eSouth Downs - I-Airbnb
IKhabhinethi yamaGcisa emazantsi eSouth Downs
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguDominique
Ikhabhinethi yethu yokuphumla ikwindawo enoxolo ngaphakathi kwegadi yethu, enembono zokuvula amabala kunye neDowns ngaphaya. Ibonelela ngendawo yokuphumla egqibeleleyo yabahambi kunye nabakhweli beebhayisikile abaphonononga indawo entle yasemaphandleni kunye najikeleze i-South Downs Way. Ilali yethu inee-pubs ezimbini ezintle, ivenkile yelali ekhethekileyo enecafe yayo encinci yangaphandle, kwaye kukuhamba nje imizuzu eli-15 ukusuka kwintengiso yedolophu yasePetworth, iPolo eMidhurst, imizuzu engama-20 ukusuka eGoodwood, kunye neyure enye/2 ukusuka kwiCathedral City. eChichester.
Ndiguqule istudiyo sam sangaphambili sobugcisa ukuba sibe yindawo ezolileyo nekhululekileyo yokubuyela umva eyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kwabahambi kwi-South Downs Way. Ikhabhinethi ijonge empuma, ishushu kwaye ilula, kwaye ngokulula ixhotyiswe kakuhle ukuze uhlale. Ikhabhinethi inebhedi yobukhulu obutofotofo, indawo encinci yesinki eneketile yekofu kunye neti kunye nefriji encinci. Ngaphakathi kwekhabhathi kukho igumbi lokuhlambela elineWC kunye nesitya sezandla.
Kukho itafile kunye nezitulo onokuthi uzisebenzise kwindawo encinci yepatio ngaphandle kwekhabhathi, kunye nendawo enengca ethandekayo phantsi komthi we-apile apho unokuhlala khona ngeengokuhlwa ezifudumeleyo ngombhobho, kodwa nceda uqaphele ukuba yinxalenye yegadi yethu kwaye hayi indawo engaphandle eyahluliweyo enemida ebiyelweyo.
Ekuseni nangokuhlwa uhlala ubona amaxhama ethafeni kunye nezikhova ezizingelayo, kwaye nengoma yeentaka imnandi kakhulu!